Ukuphupha ngokuzoba Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Sifumana iimeko ezininzi ezahlukeneyo emaphupheni ethu. Amaxesha amaninzi kwenzeka ukuba ngequbuliso senze izinto apha ezingenandawo kubomi bethu bemihla ngemihla, mhlawumbi esingakhange siyiqonde kakuhle. Ngaphezulu kwako konke, oku kubandakanya izakhono zokuyila njengokuzoba kwibhodi yokuzoba.
Abanye abantu baba ngabapeyinti abanetalente, iimvumi, okanye ababalisi bamaphupha. Kodwa kuyenzeka ukuba uphuphe ngequbuliso ufumane italente yakho yokuzoba. Kodwa kunokuthetha ntoni ukuba uhlala edesikeni yakho ephupheni uzobe into? Uthini "ukuzoba" njengomqondiso wephupha ngathi nangobomi bethu?
1 Uphawu lwephupha «zoba» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «zoba» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «zoba» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «zoba» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na ophupha ngokuzoba angayenza ngokusisiseko njengesibhengezo Utshintsho qonda. Ngokoluvo ngokubanzi, umntu ochaphazelekayo kungekudala angaligqiba inqanaba lobomi elidlulileyo kwaye ajonge kwikamva eligcwele ngamathuba amatsha. Kule meko, kwanezinto ezincinci ezibonakala ngathi azibalulekanga ekuqaleni ziya kuba nefuthe elikhulu. Ngokukodwa apha kukho amandla amakhulu okuphupha.
Ngaphaya koko, iphupha apho umntu othathelwa ingqalelo anokutsala khona amandla akhe angaziwa ngaphambili. Umzobo wento ebonakalayo enomtsalane iitalente zobugcisaNgokuqinisekileyo kufuneka ibe nendawo ethe kratya kubomi bemihla ngemihla. Amanani ejiyometri afana ne-pentagon, i-spirals, iisimboli, i-diagonals kunye nemigca umntu aphupha ukuyidweba ayimele ukucinga ngokuhlalutya Ukuphupha kuyenzeka kule meko yokuyeka iimvakalelo zakho kwaye uqhubeke ngobuchule xa ujonga iimeko zobomi ezahlukeneyo. Ngale ndlela ungena kwiinyani ngokukhawuleza. Ngokunokwenzeka iphupha licela kule meko ukusebenzisa italente ngakumbi kwiinjongo zayo. Oku kungakhokelela kumathuba amakhondo okuqhubela phambili kunye nempumelelo.
Ukuzoba uphawu lwe-yin-yang ngosiba ephupheni kuhlala kubonisa ukungqinelana kwezichasi, apho kunokuvela yonke into evisisanayo. Ukuba uzobe imandala ephupheni lakho, uhlala ufuna ukwazi ngomfanekiso ngokubanzi wobomi bakho.
Nangona kunjalo, ukuba awuzizobi ​​ephupheni, kodwa ubone omnye umntu ezobe into, kuya kufuneka usebenzise uphawu olunje isilumkiso qonda. Umntu usongela ngokuncama izintso ebomini bokuvuka. Ngokukhawuleza unokujongana nefay accompli.
Uphawu lwephupha «zoba» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni, uphawu "lokuzoba" lunokubhekisa kwikamva okanye elidlulileyo lomntu ekubhekiswa kuye. Kuxhomekeke kwinto ezotywe ephupheni, isimboli inokukucela ukuba ujonge imeko enamava. Ukuphupha kunenye Amava ayikenziwa kakuhle. Ukuba umzobo ubhekisa kwinto ezayo, thatha iindiza indlela ephathekayo. Ukuphupha emva koko kukhathalela ikamva lalo kunye noyilo lwalo. Ungazifezekisa njani iinjongo zakho? Yintoni ekuya kufuneka uyitshintshe kubomi bakho bemihla ngemihla ukuze ufumane ulonwabo lwakho?
Uphawu lwephupha «zoba» - ukutolika kokomoya
Ngokombono wokomoya, umzobo ufuzisela oku umgaqo oyindoda. Oku kukhatshwa zizakhono zohlalutyo.